हुम्लाका जिवन्त तस्वीरहरुः यसपटकको 'फोटो नेपालमा' | Hamro Patro
हुम्लाका जिवन्त तस्वीरहरुः यसपटकको 'फोटो नेपालमा'
अनि तपाईलाई थाहा छ ? यसवर्ष नेपाल पर्यटन वोर्डले घुमफिर वर्षकारुपमा प्रर्वधन गरिरहेको छ । आउनुहोस, सबैजना मिलेर यस वर्ष धेरै भन्दा धेरै स्वदेशी गाँउठाँउहरु घुमौ, हेरौ अनि जानौं । नयाँ ठाउँको यात्रा गर्नु नै धेरै भन्दा धेरै सिक्न पाउने अवसर हो अनि फेरि आफ्नो देशका ठाँउहरु घुम्न जानु एउटा गौरबको विषय पनि हो ।
भृकुटीमण्डप काठमाण्डौमा रहेको नेपाल पर्यटन प्रर्वधन बोर्ड अर्थात् नेपाल टुरिज्म बोर्डले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनकालागि हरसम्भव प्रयास अनि कसरतहरु गर्दै आएको छ ।
यीनै प्रयासहरु मध्ये एउटा कलात्मक प्रयास हो, 'फोटो नेपाल' । हरेक महिना भृकुटीमण्डप हाताभित्र रहेको नेपाल पर्यटन प्रर्वधन बोर्डमा नेपालका विभिन्न जिल्ला अथवा देशका विभिन्न सामाजिक परिवेश केन्द्रित तस्बिरहरुलाई प्रदर्शनी गर्ने गरिएको छ । जहाँ देशी र विदेशी अभ्यस्त हातहरुले खिचेका सुन्दर अनि अर्थपूर्ण तस्वीरहरुको प्रदर्शनी गर्ने गरिन्छ । शब्दहरुले अभिब्यक्त गर्न नसकिने कुरा तस्बिरहरुले बडो बिछट्टसंग अभिब्यक्त गरिदिन्छ, तस्वीरहरु त आँखिझ्याल हो, ति फ्रेम मार्फत् फ्रेम बाहिरको संसारलाई झलझली देखाईदिने यस्तै तस्बिरहरुको प्रदर्शनीमा टुरिज्म बोर्ड तपाईको पारखी आँखाको प्रतिक्षा गर्दछ ।
अाज माघ २०, २०७३ दिउँसो ३ बजेदेखि शनिबार बाहेक ३ दिन सम्म हुन गइरहेको यस फोटो प्रदर्शनीमा हामी हाम्रो पात्रो टोली पनि त्यता जाँदैछाैं, जाने हैन त नेपालको तस्बिर हेर्न ! त्यता चुल्है निम्तो छ है ।
यस वर्षको फोटो प्रदर्शनीमा हुम्लाका फोटाहरु प्रदर्शन गरिदैछ, हुम्लालाई नियाल्न आउनुहोस है, तस्बिररूपी आँखिझ्यालहरु तपाईलाई पर्खेर बस्नेछन् ।
अनि तपाईलाई थाहा छ ? यसवर्ष नेपाल पर्यटन वोर्डले घुमफिर वर्षकारुपमा प्रर्वधन गरिरहेको छ । आउनुहोस, सबैजना मिलेर यस वर्ष धेरै भन्दा धेरै स्वदेशी गाउँठाउँहरु घुमौं, हेरौं अनि जानौं । नयाँ ठाउँको यात्रा गर्नु नै धेरै भन्दा धेरै सिक्न पाउने अवसर हो अनि फेरि आफ्नो देशका ठाँउहरु घुम्न जानु एउटा गौरबको विषय पनि हो ।
केही घुमफिर वर्ष सम्बन्धि भिडियोहरु नेपाल पर्यटन बोर्डको YouTube च्यानलबाट केवल तपाईकालागि ।
पर्यटन प्रवर्धनकालागि हाम्रो पात्रो र नेपाल पर्यटन प्रर्वधन बोर्ड । यस फोटो प्रदर्शनी तथा अन्य गतिविधिहरूको नियमित जानकारीकालागि http://www.welcomenepal.com/
यो सामाग्री नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुरोधमा हाम्रो पात्रोकालागि सुयोग ढकालले तयार पार्नुभएको ।